इन्स्टाग्राम विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्कहरू मध्ये एक भएको छ, जहाँ सेवाहरू र उत्पादनहरूको प्रचार गरिन्छ। तपाईं गर्नुहुन्छके तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि कसरी तपाईं यस सामाजिक नेटवर्क को माध्यम बाट एक नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ? अगाडि नहेर्नुहोस्! अर्को पोस्टमा तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ कि कसरी इन्स्टाग्रामले चरण-चरण भुक्तान गर्दछ।
धेरै जसो बढि प्रभावकर्ताहरू छन् अनुयायीहरू, तिनीहरूले ब्राण्ड बेनिफिटहरू पाउँछन्। जहाँसम्म, यस सामाजिक नेटवर्कबाट नाफा कसरी बनाउने त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन्।
यस पोस्टमा नजर राख्न नबिर्सनुहोस्, म तपाईंलाई उत्तम सुझावहरू दिनेछु ताकि तपाईं आफ्नो खाताको लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। के तपाई खुशी हुनुहुन्छ?
तपाइँ कसरी इन्स्टाग्राम मार्फत पैसा प्राप्त गर्नुहुन्छ?
सुरु गर्न, म तपाईंलाई यो भन्न पर्छ कि इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई सिधै भुक्तान गर्दैन। रणनीति तपाईंले पछ्याउनु पर्छ ठूलो अनुसरण प्राप्त गर्न।
तपाईका सबै अनुयायीहरूसँग तपाईसँग राम्रो कुराकानी हुनुपर्दछ, यस तरीकाबाट तिनीहरुले प्रकाशित घटना वा लेखलाई ध्यानमा राख्नेछन्। यस केसमा, तपाईसँग कति जना अनुयायीहरू छन् भन्ने कुराले खास फरक पार्दैन, तर तपाइँमा उनीहरूमा प्रभाव छ।
यस हदसम्म कि तपाईं अधिक प्रभाव पाउनुहुनेछ, कम्पनीहरू तपाईंको प्रोफाइलमा रुचि राख्नेछन् र तपाईं यसको बारेमा प्रकाशनहरू गर्नुहुनेछ। त्यहीं तपाईंको अनुयायीहरू खेलमा आउँदछन्।
प्राय: प्रभावकारीहरूले सेवाहरू वा उत्पादनहरू प्रस्ताव गर्दछन्, र लेबल गरिएका कम्पनीहरूमा बिक्री उत्पादन गर्दछ। र यो कम्पनीहरू हो, जो तपाइँलाई सिधै प्रदान गरिएको सेवाको लागि भुक्तान गर्नेछ।
सफलता यो छ कि अधिक कम्पनिहरु तपाईले भाडामा लिनुहुन्छ, तपाईले अधिक आय कमाउनु हुनेछ।
कसरी पैसा कमाउनको लागि एक इन्स्टाग्राम खाता सिर्जना गर्ने?
एक इन्स्टाग्राम खाता सिर्जना गर्न जसले आय उत्पन्न गर्छ, यसमा केहि आधारभूत विशेषताहरू हुनुपर्दछ:
1। फोकस गर्नुहोस्
यो आवश्यक छ कि तपाईंले सिर्जना गर्न लाग्नु भएको खातामा तपाईंलाई के मनपर्दछ र कसमा पुग्न चाहनुहुन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ। धेरै जसो कम्पनीहरूले खाताहरू आवश्यक गर्दछ जुनसँग तिनीहरूको आफ्नै शैली छ र सामग्री सुसंगत छ।
उदाहरण को लागी, यदि तपाईं फेसन को बारे मा प्रकाशित गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईं अन्य विषयहरूमा सामग्री ह्या hanging्ग गर्नबाट बच्नु पर्छ जुन फेशनसँग केहि गर्नुपर्दैन।
2 प्रकाशनहरूसँग अनुरूप हुनुहोस्
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले सन्तुलन कायम राख्नु हुन्छ तपाईंले राख्नुहुने छविहरूका बारे र प्रकाशन हुँदा स्थिर रहनुहोस्। साथै, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले ह्यासट्याग प्रयोग गरेर अन्य पोष्टहरूमा टिप्पणी गरेर नेटवर्कको सहभागिता बढाउनुहोस्।
3 सम्बद्ध लिंकहरू प्रयोग गर्नुहोस्
प्रयोग गर्न केही गाह्रो विकल्प भए पनि, धेरै लाभहरू प्राप्त गर्न यो धेरै उपयोगी छ। कम्पनीहरूले तपाईलाई प्रत्येक पटक भुक्तानी गर्नेछ जब कसैले एक उत्पादन खरीद गर्न एक सम्बद्ध लिंक मार्फत प्रवेश गरे।
यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि, यदि तपाइँ एक उत्पादन प्रकाशित गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ कम्पनी लेबल प्रदान गर्नुहुन्छ जसले यसलाई प्रस्ताव गर्दछ। सम्झन को लागी प्रत्येक पोष्टको लागि सहि ह्यासट्यागहरू।
5 बलियो प्रोफाइल प्राप्त गर्नुहोस्
यो महत्त्वपूर्ण प्रोफाइल प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण छ, एक रमाईलो शैली र धेरै दर्शकहरूको साथ, जुन धेरै ब्रांडहरूमा आकर्षक हुनेछ। पछि, तपाईलाई चाहिने सबैको साथ खाता निर्दिष्ट गर्नुहोस्, जहाँ धेरै तपाईंको प्रोफाइलमा रुचि राख्नेछन्।
हामी कसरी खाता संचालन गर्छौं?
तपाइँको खाता कसरी चलाउने भन्नेमा दुई तरीका छन्:
1 प्रभावकर्ताले कम्पनीलाई सम्पर्क गर्दछ
यदि तपाइँ सुरू गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो निश्चित रूपमा तपाइँको हो जसले तपाइँको सेवाहरू प्रदान गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ। धेरै प्रभावकारीहरूको लागि बजार सेवाले प्रभावकारीहरूलाई मद्दत गर्दछ।
यहाँ तपाईंले पृष्ठमा दर्ता गर्नुपर्नेछ, तपाईंको सामाजिक नेटवर्कहरू सम्बद्ध गर्नुहोस् र तपाईंको सेवाहरूमा रुचि राख्नेहरूले तपाईंलाई सम्पर्क गर्न अपेक्षा गर्दछ।
2 कम्पनी सम्पर्क जब इन्फ्लरर
यो मोडलिटी तिनीहरूको लागि काम गर्दछ जो पहिले नै बलियो र रमाईलो प्रोफाइल छन्। कम्पनी एक हो जो तपाईको सेवाहरूमा रुचि राख्दछ, किनभने तपाईका अनुयायीहरूमा भएको प्रभावको कारण। त्यो प्रभावको माध्यमबाट तपाइँ तपाइँको विज्ञापनदाताहरु लाई गुणस्तरीय ट्राफिक उत्पन्न गर्नुहुन्छ।
सुरुमा, लाखौं डलर प्राप्त गर्ने आशा नगर्नुहोस्, राम्रो मुनाफा लिनको लागि समय र प्रयास चाहिन्छ। यद्यपि, अलि अलि गर्दै तपाईंले उत्कृष्ट आम्दानी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
म पैसा कमाउन के गर्न सक्छु?
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंलाई उपकरणहरू, प्लेटफर्महरू र सुझावहरू कसरी थाँहा हुन्छ भनेर जान्नुहोस् पैसा कमाउनुहोस् इन्स्टाग्राममा। यी यस सामाजिक नेटवर्कमा सबै भन्दा लोकप्रिय छन्:
1 अनलाइन प्लेटफर्महरूमा प्रायोजित प्रकाशनहरू
यस मोडमा एक ब्रान्डले तपाईंलाई सम्पर्क गर्दछ र तपाईंलाई पैसा खर्च गर्दछ। तपाईंले सेवा वा उत्पादन प्रचार गर्ने भिडियो र फोटो प्रकाशित गर्नुपर्नेछ, र सन्देशमा ह्याशट्यागहरू उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
त्यहाँ छन् वेबसाइटहरू जसले सेवा प्रदान गर्दछ तपाइँका सेवाहरू प्रकाशित गर्नका लागि ब्रान्डले तपाइँलाई सम्पर्क गर्न सक्दछ। तिनीहरूमा तपाईंले एउटा खाता बनाउनुपर्नेछ, यसलाई तपाईंको इन्स्टाग्राम खातामा जडान गर्नुहोस्, र त्यसो भए तपाईं कम्पनीमा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंले प्रचार गर्न चाहानुहुन्छ।
2 सीधा प्रायोजित प्रकाशनहरू
यो मोड 50.000 भन्दा बढी अनुयायीहरूको साथ खाताहरूको लागि हो र जसले इन्टरनेटमा धेरै दृश्यता उत्पन्न गर्दछ। यो सामान्यतया फूड्स, फोटोग्राफरहरू, संगीतकारहरू, फेशन र सौन्दर्य ब्लगरहरूको लागि हो।
ब्रान्डले तपाईंलाई सम्पर्क गर्दछ, सामग्री प्रकाशित गर्दछ, टिप्पणीहरू र ह्यासट्याग समावेश गर्दछ र त्यसपछि तपाईं भुक्तानी पैसा पाउनुहुनेछ।
3 फोटोहरू बेच्नुहोस्
यहाँ यो आवश्यक छ कि तपाईंको फोटोहरू भव्य हो, अन्यथा, यसलाई वेवास्ता गर्नुहोस् किनभने यस मोडेलिटीका लागि प्रतिस्पर्धा धेरै छ।
तपाइँ अनुप्रयोगहरू मार्फत पैसा बनाउन को लागी Foap, जुन एक प्लेटफर्म हो जहाँ कम्पनीहरूले धेरै विशिष्ट फोटोहरू खोज्छन्। ती विज्ञापन सामग्री वा वेबसाइट को लागी आदर्श फोटो हो।
4 उत्पादन प्रचार गर्नुहोस्
तपाईंले एक वा अधिक उत्पादनहरू प्रकाशित गर्नुपर्नेछ, तपाईंको इन्स्टाग्राम खाता मार्फत बेच्नुहोस् र प्रत्येक बिक्रीको लागि कमिशन कमाउनुपर्नेछ। विचार यो छ कि तपाईका धेरै अनुयायीहरू छन्, यिनीहरूले बिक्री उत्पादन गर्छन् र कमिशनमा अधिक पैसा पनि दिन्छन्।
साथै, तपाई प्रभावकारीहरूलाई सम्पर्क गरी उनीहरूलाई भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको प्रोफाईलमा तपाईंको खाताको उल्लेख अपलोड गर्नुहोस्। तपाईले आफ्नो उत्पाद र सेवाहरु को बारे मा केहि खरीदहरु खरीद गर्न सक्नुहुन्छ धेरै प्रभावकारीहरु लाई सम्पर्क गरेर।
5 सेवाहरू बेच्नुहोस्
यस विधिलाई हजारौं अनुयायीहरू पनि आवश्यक छन्, यो असम्भव छ कि अनुयायीहरूको सानो संख्याको साथ तपाईंले धेरै नाफा लिनुहुनेछ।
तपाईको खाता मार्फत तपाईले सेवा प्रदान गर्नुहुनेछ, यो फोटोग्राफर, संगीतकारहरू, स्वास्थ्य सेवाहरू, सौन्दर्यका लागि उपयोगी छ।
6 अनलाइन स्टोरहरूबाट उत्पादनहरू बेच्नुहोस्
तपाईं एक अनलाइन स्टोर प्रस्ताव उत्पादनहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, पछि तपाईं फलोअरहरू र भविष्यका ग्राहकहरूको एक मजबूत समुदाय बनाइसक्नु भएपछि।
यो आवश्यक छ कि तपाईंसँग एक अनलाइन स्टोर छ, र इन्स्टाग्राम मार्फत तपाईंले प्रस्ताव गर्नुभएको उत्पादनहरूलाई दृश्यता दिनुहुन्छ।
7 इन्स्टाग्राम खाता बेच्नुहोस्
यो इन्स्टाग्राममा राम्रो आय प्राप्त गर्ने अर्को तरिका हो। यदि तपाईंसँग हजारौं अनुयायीहरू र धेरै प्रभावको साथ खाता छ भने, तपाईं आफ्नो खाता बेच्न कोशिस गर्न सक्नुहुनेछ।
केहि ब्रान्डहरू जुन इन्स्टाग्रामको विश्वमा सुरू गर्न चाहन्छ, तर स्क्र्याचबाट सुरू गर्न चाहँदैन। त्यसो भए, त्यहाँ तिनीहरू खाताहरू खोज्दछन् जुन हजारौं अनुयायीहरू र सment्लग्नता छन् तिनीहरूलाई परिमार्जन गर्न र तिनीहरूबाट अधिक प्राप्त गर्न।
8 "स्वाइप अप" को फाइदा उठाउँदै
यस मोड्युलिटीका लागि यो आवश्यक छ कि तपाईंसँग 10.000 भन्दा बढी अनुयायीहरू छन्। त्यहाँबाट, इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई तपाईंको इन्स्टाग्राम स्टोरीहरूमा लिंक पोष्ट गर्न अनुमति दिनेछ र तपाईं आफ्ना अनुयायीहरूलाई तपाईंको अनलाइन स्टोरमा निर्देशित गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईंसँग अनलाईन स्टोर छैन भने तपाईं सम्बद्ध उत्पादनहरू बिक्री गर्न पैसा पाउन सक्नुहुनेछ र प्रत्येक बिक्रीको लागि कमिशनहरू कमाउन सक्नुहुनेछ।
जबकि यो सत्य हो कि कमिसनहरू उच्च छैनन्, यदि तपाईंसँग धेरै अनुयायीहरू छन् तपाईं यस मोडिलिटीबाट राम्रो नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ।
इन्स्टाग्राममा म कति पैसा कमाउन सक्छु?
इन्स्टाग्राम मार्फत प्राप्त हुने लाभ खातामा भएका अनुयायीहरूको संख्यामा निर्भर हुन्छ।
यो स्थापित गरिएको छ कि कम्तिमा 10.000 फलोअरहरूलाई आवश्यक छ राम्रो पैसा कमाउन। यस संख्याका अनुयायीहरूको लागि, प्राय जसो कम्पनीहरूले भुक्तान गर्न इच्छुक छन् 130aपोष्टको लागि।
जब खाता 30.000 फलोअरहरूमा पुग्छ, तिनीहरू अलि बढी कमाउन सक्छन्। यस संख्याका अनुयायीहरूका लागि औसत मुनाफा 970 $ एक फेशन वा सौन्दर्य ब्रान्ड पोष्टको लागि हो।
माइक्रो प्रभावकर्ताहरूको लागि, जससँग प्राय: कम अनुयायीहरू हुन्छन् उत्पाद नमूनाहरू कमाउँछन्।
30.000 भन्दा धेरै अनुयायीहरू खाताहरू छ आंकडाको औसत लाभ प्राप्त गर्नेछन्। यद्यपि यी केवल अनुमानहरू मात्र हुन्, खाता प्रकारको हिसाबले कमाई निकै भिन्न हुन्छ। साथै, यदि सार्वजनिक खाता कथाहरू लिंक, तपाईंको खाता र अन्य भेरियन्टहरूमा लिंकहरू राख्नुहोस्।
अन्तमा, इन्स्टाग्राममा पैसा कमाउनुको धेरै विविधता छ, तपाईंले विज्ञापनमा आफ्नो शक्ति खोज्नु पर्दछ।
यहाँ मैले तपाईंलाई उत्तम उपकरणहरू छोडेको छु त्यसोभए थाहा छ इन्स्टाग्रामले कसरी भुक्तानी गर्छ। यो सजिलो मार्ग होइन, तर प्रयासको साथ तपाईं यसलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ।